musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Vols paFlyr uye Vueling kubva kuMilan Bergamo izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Italy Kuputsa Nhau • nhau • Norway Kuputsa Nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Milan Bergamo inozivisa kuwedzerwa kwevaviri vatsva venhandare yendege yeZima 21/22, ichisimbisa kusvika kweFlyr neVueling mumwedzi inotevera.
Kutanga muna Chikumi pamwe nendege dzekumba, ndege yekutanga yeNorway Flyr yaisanganisira Milan Bergamo pakati pekutanga nzira dzayo dzenyika dzese.
Kuwedzera kusimbisa kubatana kwaMilan Bergamo, Spanish LCC Vueling ichatanga kubatana neParis Orly kubva 2 Mbudzi.
Flyr ichatanga sevhisi mbiri-svondo kunzvimbo yayo kuOslo, Norway kutanga kubva Ndira 5, 2022.
Vhiki rino Milan Bergamo Airport yazivisa kuwedzerwa kwevamwe vaviri vatsva vendege vanozobatana nendege panguva yeW21 / 22. Kutora huwandu hwese kune vatakuri vashanu vari kugamuchirwa kuLombardy gedhi rekufona gore rino, nhandare yasimbisa kusvika kwaFlyr naVueling mumwedzi inotevera.
Kutanga muna Chikumi pamwe nendege nendege, ndege yekutanga yeNorway Flyr zvaisanganisira Milan Bergamo pakati pekutanga kwenzira dzayo dzenyika dzese. Kuvhura nzvimbo nyowani kunzvimbo inochengeterwa Lombardy, mutakuri wemutengo wakaderera (LCC) ichatanga sevhisi mbiri-svondo kunzvimbo yayo kuOslo kubva musi wa5 Ndira 2022. FlyrKubatana kwakananga kuOslo kunoreva kuti nhandare yendege yeItaly ichapa zvigaro zve756 vhiki nevhiki kuNorway mumwaka wechando.
Kuwedzera kusimbisa Milan Bergamokubatana, Spanish LCC Vueling ichatanga kubatana neParis Orly kubva 2 Mbudzi. Kuvhura katatu-katatu kwevhiki kushanda, iyo IAG Boka renhandare nendege purogiramu nyowani kubva kuguta reFrance ichawedzera nhandare yendege yatove nesimba kuFrance. Kupa zvigaro zve5,190 zvevhiki nevhiki kuWestern Europe nyika, Vuelingchinongedzo kuParis Orly chinova Bergamo yechinomwe yekuFrance kuenda, kujoina Bordeaux, Marseille, Paris Beauvais, Paris Charles de Gaulle, Tarbes-Lourdes neToulouse.
Vachitaura nezvezviziviso zvitsva zvendege nekuenda, Giacomo Cattaneo, Director weCommercial Aviation, SACBO anoti: “Nguva dzose mufaro mukuru kugamuchira shamwari itsva yendege, kuzivisa vaviri panguva imwe chete kwakashamisa, nevatakuri vaviri vachiwedzera nzvimbo dzinoyevedza kunzira yedu. network uye kuziva kugona kunogona kubva Milan Bergamo. Nezvatiri kuwedzera izvozvi ndinodada nekusimbisa kuti iye zvino tava nendege gumi nenhatu dzinoshandira nzvimbo zana negumi nenhatu munyika makumi matatu nepfumbamwe kubva mudunhu reLombardy kuratidza kuvimba kwevanhu vese kwekudzoka patsva nekuwedzera panhandare yendege yedu. ”
Cattaneo anowedzera kuti: "Tine ndege zhinji dzinoverengeka dzinobatana nesu uye neWorld Routes muMilan mukupera kwesvondo, ino inguva yakanakira kuti dzimwe ndege dziuye kuzotaura nesu, ive chikamu chemikana uye ramangwana rakanaka kuMilan Bergamo."